Zuva: Kukadzi 10, 2020
14 Mamirioni Vaipfuura Vakashandisa Ndege munaJanuary
General Directorate of State Airports Authority yazivisa nezveyavo ndege, vafambi uye nhamba dzekutakura huwandu hwaJanuary 2020. Naizvozvo, muna Ndira 2020; Kuwanda kwenhandare iyo inofamba uye kuenda kune nhandare; [More ...]
IETT Inopemberera Anniversaries yeT Tunnel uye Nostalgic Tram Pamwe
Nhoroondo Karaköy Tunnel, inova yechipiri pasi penyika, ichapemberera gore yayo yechigumi nematatu uye Nostalgic Tram, iyo chiratidzo cheByoğlu, ichatemberera gore yayo yechigumi nemashanu. Mwaka uno IETT inopemberera zvimisikidzo zveTunnel uye Nostalgic Tram pamwe chete. Chipiri, Kukadzi 145 [More ...]
Denizli Zvekufambisa Investment Akatsika 2019
Denizli ndiye muenzaniso Turkey chokufambisa upfumi kuti chinozoiswa Metropolitan Municipality, 2019? Km Asphalt mugwagwa muna 140 pamwe 120? Km nekongiri tichigadzira migwagwa uye menzira zvechizarira vakaita basa. Metropolitan Municipality achipfuura [More ...]
Antalya Usafambisa Master Chirongwa Zvidzidzo Endererai
Nechinangwa chekuita kuti Antalya ive guta rakarongwa, rakajairwa uye rekuzivikanwa, mukati mechikamu cheTransation Master Planning kudzokorora kunoshanda, matambudziko ekufambisa eruzinda rweguta uye matunhu 19 anogadziriswa mumwe neumwe. Muchirevo chechinyorwa chino, chakaitirwa muElmalı [More ...]
Yakatangwa Kudzidziswa kweEGO Drivers neCitizen
Kekutanga, Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate inoronga dzidziso inoshanda umo vatyairi vanoshandisa zvifambiso zveruzhinji vanogona kutaurirana zvakanaka nevagari. Icharamba ichienderera kusvika pakupera kwaFebruary [More ...]
Manisa Metropolitan Disinfects Mota dzekutakura vanhu
Mukubatana neManisa Metropolitan Municipality Health Health department uye Dhipatimendi Rezvekufambisa, hutachiona hwakatangwa mumotokari dzinopa vanhu mabasa ekufambisa mukati uye pakati pemaguta eManisa. Zviuru zuva nezuva muManyisa [More ...]
Nhoroondo Paşabahçe Ferry Pulls kune Haliç yeRenewal
Ndichakamirira zuva rezaini pamhenderekedzo yeBeykoz, nhoroondo Paşabahçe Ferry, iyo yakaendeswa kuCity Lines zvakare nehurongwa hweIMM, yakatanga kudhonzwa kuenda kuU Haliç Shipyard kuti igadziriswe uye igadziriswe. Chikepe chinodzoreredzwa chinodzokera kuBosphorus uye [More ...]
Istanbul Island Ferry uye Hike kuenda kuEveist Flights
Chitsuwa chechikepe uye ndege dzeEveist dzakasimudzwa muIstanbul. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), kukwira kwemitengo yezvifambiso zvevoruzhinji kunotanga kushanda sekumangwanani ano, uye mutengo wakazara we tikiti weZvitsuwa une maferi akabatana neCity Lines [More ...]
Marmaray Inosanganisirwa MuIstanbulkart Transfer System
Marmaray, inoshanda neIse Ministry yeZvekutakura Nzvimbo Nekudaro, vagari vane tikiti yakazara kuMarmaray mushure memotokari yekufambisa yeruzhinji vanozotora 7,75 TL [More ...]
Karabağlar Selvili Pasi pePaki Kupaka Roti yakaiswa mumabasa nhasi. Izmir Metropolitan Meya weTuç Soyer, uyo akavhura, akataura kuti kunze kwekudyara nzvimbo dzekuchengetera, zviteshi zvechitima zvirikuenderera mberi. Izmir Metropolitan Municipality muKarabaglar Selvili [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) anopinda 1500 musarudzo pedyo 356 mugumisiro wake nomumukanwa kuongororwa kuti muchiuto dzinenge 190 mazuva, pasinei neapo ichifamba tsananguro. Oral yevanonyorera avo vanonyorera kuburikidza neİkurkur [More ...]
Keçiören Kızılay Metro achaiswa riini basa?
AKM-Chitima Chiteshi-Red Crescent Subway inoshanda, iyo ichapa zvifambiso zvakananga pakati peKızılay neKeçiören, zvakarongerwa kupedzwa gore rinouya. Kana mutsara mutsva uchipinda mukushandira, vagari havafanirwe kuita hop-on hop-off pane AKM station. Ministry of Transport uye Zvivakwa, zvakaburitswa pawebsite yepamutemo [More ...]
Kupindura Pamwe Mukusaina Kutadza muKocaeli
Zvikwata zvekusainira zvakabatana neTraffic Management Branch Directorate yeKocaeli Metropolitan Municipality Transportation department zvinopindira ipapo kumasisitimu anosaina purovhinzi. YEMAHARA YEMAHARA Kocaeli Metropolitan Municipality Zvinonyanya kukosha zvezvimigwagwa [More ...]